UGREEN တရုတ် ကျောက်မျက် ဈေးကွက် စာရင်း ဝင် ရန် ပြင်ဆင် နေ – Pandaily
UGREEN တရုတ် ကျောက်မျက် ဈေးကွက် စာရင်း ဝင် ရန် ပြင်ဆင် နေ
Jun 06, 2022, 12:59ညနေ 2022/06/06 14:11:52 Pandaily
ရှန်ကျန်း အခြေစိုက် စားသုံးသူ အီလက်ထရွန်နစ် ကုမ္ပဏီ UGREEN သည် ရှန်ကျန်း စတော့အိတ်ချိန်း သို့ အလားအလာ ရှိသည်ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုေတာ့ တ႐ုတ္ စေတာ့အိတ္ ခ်ိန္း မွာ IPO လုပ္ဖို႔ စီစဥ္ ထားလို႔ ပါ။ Huatai United Securities သည်၎င်း၏ စပွန်ဆာ နှင့်အဓိက အာမခံ သူဖြစ်သည်။
UGREEN နည်းပညာ နှင့် စားသုံးသူ အီလက်ထရောနစ် ၏ လယ်ပြင် ၌ အာရုံစူးစိုက် ခြင်း, အဓိက အားဖြင့် R & D, ထုတ်လုပ်မှု နှင့် 3C ထုတ်ကုန်များ၏ ရောင်းချ မှု စေ့စပ် ။ သုံးစွဲ သူများကို ပြည့်စုံသော ဒီဂျစ်တယ် ဖြေရှင်းနည်း များ ပေးအပ် ရန် ကတိက ဝတ်ပြု ထားကြောင်း ထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့သည်။ ထုတ်ကုန် များတွင် အဓိကအားဖြင့် docking stations, headphone, charging cable, mobile power bank, portable storage devices စသည်တို့ပါဝင်သည်။
IPO မှတစ်ဆင့် ကုမ္ပဏီ သည်ယွမ် ၁. ၅ ဘီလီယံ (ဒေါ်လာ ၂၂၅. ၅ သန်း) ကိုမြှင့်တင် ရန်စီစဉ်ထားသည်။ ကုန်ပစ္စည်း သုတေသနနှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု နှင့်စက်မှု ဆောက်လုပ် ရေးအတွက် ယွမ်သန်း ၅၅၀ နှင့် အသိဥာဏ် ရှိသော သိုလှောင် ခြင်းနှင့် ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေး ဆောက်လုပ် ရေးအတွက် ယွမ်သန်း ၁၁၀ ကိုအသုံးပြုသည်။ ယွမ် ၃ ၉၂ သန်းကို ဌာနချုပ် လည်ပတ် ရေး စင်တာ နှင့် ကုန်အမှတ်တံဆိပ် ဆောက်လုပ် ရေးအတွက် ရည်ရွယ် ထားပြီး ကျန် ရှိသည့် ယွမ်သန်း ၄၅၀ ကို ငွေ ဖြစ် လွယ် မှု ဖြည့်တင်း ရန်အသုံးပြု လိမ့်မည်။
Prospectus အရ Yougreen သည် ၂၀၁၉ ခုနှစ်တွင် ယွမ် ၂. ၀ ၄၅ ဘီလီယံ၊ ၂၀၂၀ တွင် ယွမ် ၂. ၇ ၃၈ ဘီလီယံ နှင့် ၂၀၂၁ တွင် ယွမ် ၃. ၄ ၄၆ ဘီလီယံ တို့ ၏စုစုပေါင်း အမြတ် ငွေ ၃၅. ၇၁% ၊ ၃၈. ၁၀% နှင့် ၂၀၁၉ မှ ၂၀၂၁ အထိ ၃၇. ၂၁% အသီးသီးရှိသည်။ ျပည္တြင္းျပည္ပ ေစ်းကြက္ ကေတာ့ ၀င္ေငြ ရဲ႕ ထက္၀က္ နီးပါး ရွိပါတယ္။ နှုတ် ယူ ပြီးနောက် အသားတင် အမြတ် သည် ၂၀၁၁ ခုနှစ်တွင် ယွမ်သန်း ၂၂၀ ၊ ၂၀၂၀ တွင် ယွမ် ၂၈ ၇ သန်းနှင့် ၂၀၂၁ တွင် ယွမ် ၂၇ ၆ သန်း ရှိခဲ့သည်။
ဒါ့အပြင် ကြည့် ပါ:အီလက်ထရောနစ် ကုန်ထုတ်လုပ်မှု ကုမ္ပဏီ In-Tech သည် IPO လျှောက်လွှာ ကို HKEx သို့ပြန်လည် တင်သွင်း သည်
၂၀၁၉ မှ ၂၀၂၁ အထိ Green League ၏သုတေသန နှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဆိုင်ရာ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု သည်ယွမ် ၆၄. ၈၈ ၃ သန်း၊ ယွမ် ၉၅. ၁၂၇ သန်းနှင့် ယွမ် ၁၅၇ သန်း အသီးသီး ရှိပြီး လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှု ၀ င်ငွေ၏ ၃. ၁၇% ၊ ၃. ၄၇% နှင့် ၄. ၅၄% အသီးသီးရှိသည်။
အလားအလာ ကောင်း များအရ ကုမ္ပဏီသည် ပြည်တွင်းနှင့်ပြည်ပ စျေးကွက် များကို ဖွင့်လှစ် ခဲ့ပြီး တရုတ်၊ အမေရိကန်၊ ဗြိတိ န်၊ ဂျာမနီ နှင့် ဂျပန် စသည့် နိုင်ငံများနှင့် ဒေသများရှိ အွန်လိုင်း နှင့် အော့ ဖ် လိုင်း အရောင်း လမ်းကြောင်း များ ကိုကျင့်သုံး နေသည်။
စားသုံးသူ အီလက်ထရောနစ် လုပ်ငန်း၏ စျေးကွက် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက် မှုမှာ ဆက်လက် တိုးတက် နေသည်။ စီ အိုင် အေ ၏ စာရင်းများအရ ၂၀၁၈ ခုနှစ်တွင် စက်မှု လုပ်ငန်း၏ ရောင်းအား သည်ယွမ် ဘီလီယံ ၃၀၀ ခန့်ရှိပြီး စုစုပေါင်း တင်ပို့ မှုမှာ ၃. ၈ ဘီလီယံ ခန့်ရှိသည်။ 2019 ခုနှစ် တွင်စုစုပေါင်း စက်မှုလုပ်ငန်း ရောင်းအား သည်ယွမ် ၃ ၈၂. ၈ ဘီလီယံ ခန့်ရှိသည်။ ၂၀၂၀ ခုနှစ်တွင် စက်မှု စျေးကွက် ၏အရွယ်အစား သည်ယွမ် ဘီလီယံ ၄ ၈၀ ထက်ကျော်လွန် မည်ဟု ကောလာဟလ များ ထွက်ပေါ် ခဲ့ပြီး သုံးနှစ် CAGR သည် ၁၆. ၉၆% ရှိသည်။
Embedded CPU ဒီဇိုင်း ကုမ္ပဏီ C * CORE Technology သည် Shanghai Xingkong တွင် စာရင်းဝင် သည်
Embedded CPU ဒီဇိုင်း ကုမ္ပဏီ Suzhou C * CORE Technology Co., Ltd. သည် ရှန်ဟိုင်း စတော့အိတ်ချိန်း ၏ Star Market တွင် ရှယ်ယာ တစ်စု လျှင် ၄၁. ၉၈ ယွမ် (အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၆. ၅၈) ဖြင့် စာရင်းဝင် ခဲ့သည်။
ဆက်သွယ်ရေး ချစ်ပ် ထုတ်လုပ်သူ ASR Microelectronics သည် Shanghai Star Market တွင် စာရင်းဝင် ခဲ့ပြီး စတော့ရှယ်ယာ သည်ပထမ ဆုံးအကြိမ် ကျဆင်းသွား သည်
ဆက်သွယ်ရေး ချစ်ပ် ထုတ်လုပ်သူ ASR Microelectronics သည် သောကြာနေ့က ရှန်ဟိုင်း နည်းပညာ ဆန်းသစ် တီ ထွ င်မှု ဘုတ်အဖွဲ့ (Star Market) တွင် တရားဝင် စာရင်းဝင် ခဲ့သော်လည်း ပထမ နေ့တွင် စတော့ စျေးနှုန်း ကျဆင်းခဲ့သည်။
Industry Jan 14 ဇန်နဝါရီ 14, 2022